Savaravina Ataon’ny Media Sosialy Karibeana Momba Ny Hatezerana Mafy Mitambolona Manodidina Ny Fihetsika Tampok’ilay Mpilalao Cricket Chris Gayle · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2016 3:28 GMT
Chris Gayle tamin'ny lalao Cricket Prime Ministers 11 tany Canberra ny taona 2010. Sary an'ilay mpampiasa Flickr NAPARAZZI. CC BY-SA 2.0
Telo herinandro eo ho eo taorian'ny finantsanantsànan'ilay mpilalao cricket Antilles Chris Gayle nandritra ny tafatafa mivantana niaraka tamin'ilay mpitati-baovaon'ny fanatanjahantena, Melanie McLaughlin, mbola miresaka momba an'io ihany ireo mpisera amin'ny Aterineto Karaibeana. Nahatonga adihevitra lehibe io tao amin'ny Aterineto, mikasika ny kolontsainan'ny resaka firaisana mamàka lalina, sy ny fanavakavahana amin'ny fanatanjahantena, ary ny hoe notsaraina tsy an-drariny sa tsia hoe lehilahy mpanakorontana i Gayle.
Mbola mafana tsy misy ohatra izany hatrany ny adihevitra. Ilay mpitoraka bilaogy, Carolyn Joy Cooper, izay manoratra ao amin'ny Jamaican Woman Tongue, namakafaka hoe inona no nidiran'i Gayle (izay matetika mitonon-tena ) ho tsara tarehy amam-bika ary miavaka, tao anatin'iny korontana iny.
Nandritra ny tafatafa niaraka tamin'i McLaughlin, taorian'ny ampahan'ny fifaninanana ho an'ny T20 (nihoatra be) ny ekipan'ny cricket Melbourne Renegades tamin'ny lalao Big Bash League nifanantrehan-dry zareo tamin'ny Hobart Hurricanes, tsy nahatàna vava i Gayle nilaza fa mahafatifaty azy ny fahitàny ilay mpitati-baovao. Nomarihan’ny lahatsoratry ny bilaogin'i Cooper fa “tsy voalohany amin'ireo mpilalao fanatanjahantena voasarika amin'ny hatsaran'i Ramatoa McLaughlin” i Gayle:
Ny taona 2012, nampiakatra ny “micro” mihitsy ilay mpilalao baolina malaza Aostraliana Tim Cahill mba horesadresahan'ilay mpanao gazety ary tonga dia nanoroka azy tampoka teo amin'ny takolany. Hita sadaikatra be i Ramatoakely McLaughlin. Tena tampoka be taminy ilay izy. Mety nivoaramena mihitsy aza izy. Fa tsy nikorontana izy. Nihomehy kely izy ary niteny hoe, ‘ENY ARY.’ Fa inona iny?
Araka ny fantatro aloha, tsy nisy resaka na kely aza nikasika iny horoky Cahill iny. Tsy nisy resaka hoe sotasota ara-nofo teny amin'ny toeram-piasana. Tsy nisy lamandy naloa. Tsy nisy fitakiana ho fibahanana manerantany an'i Cahill. Tsy nisy tantara noforonina hoe nampidera tena taminà vehivavy tsy fantatra anarana nirenireny tany amin'ny efitrano fisoloan'ny lehilahy akanjo i Cahill. Fotsy i Cahill ary mainty i Gayle. Izany ve no mampiavaka ny fomba fandraisana ireo mpanao fanatanjahantena roa ireo?
Tsy milaza akory izany fa tsy “nivoaka ny fefy” i Gayle. Niaiky i Cooper fa tsy tokony nataony ilay fidirana tampoka, nampiany hoe:
Ny tena nahafanina dia hoe tamin'ny fomba tea matianina no nanombohan'ilay tafatafa.
Raha jerena eo ankilany ny “tantaran'i Emmett Till”, tanora Amerikana mainty izay nisy namono noho ny filazàna fa nisary zoro taminà vehivavy fotsy ny taona 1955, nanamarika ihany koa i Cooper fa niezaka namerina ilay tafatafa ho amin'ny zotran'ny fanaovana asa matianina kokoa ny hadalàn'i Gayle tamin'i McLaughlin, nilaza hoe mety nitondra tamin'ny ambaratonga fitsikeràna mahery setra atao aminy koa:
Manam-bitana i Gayle. Mety tsy hisy hamono noho ny fisariana zoro tamin'i Mel McLaughlin tao amin'ny fahitalavi-pirenena izy. Fa mety hisy vokany amin'ny hoavin'ny asany izany. Miantso ny fibahanana maneran-tany an'i Gayle ilay mpilalao cricket Aostraliana Ian Chappell. Toa hita ho tsy mifanaraka fa mihoatra ny zavatra vita io sazy io. Nanao hadisoana adala i Gayle. Fa raha hoe halàna tanteraka amin'ny cricket mandrakizay kosa ve?
Nilaza i Gayle fa hanihany tsy misy dikany iny. Te-hino azy aho. Ary nalefany mivantana tamin'ny fahitalavitra io. Fampisehoana iny! Amiko, mahatonga ilay fikaotiana tsy hampikorontan-tsaina noho ny natao manokana tany ambadimbadika tany izany. Fa mbola mandrahona ilay ‘lehilahy’ ihany, na amin'ny taonjato faha-21 aza, ny sarinà lehilahy iray mainty mpanao fanatanjahantena mikaotikaoty vehivavy fotsy. Toa izany no hita ho tena olana marina.
Toa io foana no ventin-drasaka hatrany hatrany. Ao amin'ny vondrona Facebook Wired868, nitsikera lahatsary nalefa ahitàna ireo olomalazan'ny fanatanjahantena maro samihafa nisary zoro nivantana tamin'ireo mpanao gazetin'ny fanatanjahantena i Lasana Liburd mpanao gazety ara-panatanjahantena, io fandefasana io izay toa naneho hoe i Gayle no nahazo ilay ampahany fohy tamin'ny hazokely satria izy mainty:
…Fantatrareo ve ity hoe lahatsarinà [mpilalao baolina Espaniola] Iker Casillas manoroka ny vadiny?! Sipany izy io tamin'izany fotoana izany.
Eny, mety hoe tsy nanoroka nivantana tamin'ny fandaharana izy ary sadaikatra ilay vehivavy. Fa mieritreritra aho fa misy fahasamihafany amin'io sy ilay fisariana zoro tsy niriana nataon'i Chris Gayle.
Ny maribolana eo ambanin'ilay lahatsary no tena tsy fahalalàna na inona na inona mahazendana amin'io. Manadala saina.
Nanohy nanamarika ny namany Rhoda Bharath i Liburd ao anatin'ity lahatsoratra ity, ary ny tenako, izay nitafatafa tamin'izy roa mikasika ilay resaka Gayle. Nanontany anay izy raha toa ka “nahita ilay lahatsary izahay ary hoe ahoana ny fijerin'ny olona izany”. Namaly i Bharath:
hatramin'ny oviana aho no avela “steups”? [hihidy vazana, matetika ampiasaina hanehoana ny tsy hafaliana] nanao adalàna i Gayle, mirehareha amin'ny maha lehilahy azy ary tsy matianina mihitsy. Tsy hanova izany ireo zavatra tenenina rehetra mifototra amin'ny resaka ‘relativism’ ara-moraly.
Mitovy hevitra amin'izany ny Jamaica Woman Tongue, fa nametraka ihany koa hoe tokony hisy fenitra arahana amin'ny sehatra rehetra:
Eny, tsy zavatra mampihomehy ny resaka fanadalàna ara-nofo amin'ny asa. Ary tsy ireo vehivavy fotsiny ihany koa no misy manadala lava. Misy manadala lava ihany koa ireo lehilahy , ataon'ireo lehilahy sy vehivavy. Tokony ho tontolo iainana milamina ny toerana fiasana, izay ahafahan'ireo lehilahy sy vehivavy miasa amim-pilaminana tsy misy tahotra ny mety hisy hikaoty tsy iriana.
Teo am-pamaranana tamin'ny teny mahery, nanadrohadro toy izao i Cooper:
Na dia mihoatra ny tokony ho izy aza ny fanamelohana manerantany ny fanadalàn'i Chris Gayle an'i Mel McLaughlin tamin'ny asany, fampahatsiahivana tsara ilay resabe mikasika iny zava-nitranga iny, milaza fa misy ny tsipika tokony tsy azo ihoarana.
Mino aho fa hieritreritra indroa ankehitriny i Chris Gayle, raha tsy hihoatra mihitsy aza, mikasika ny fanasàna vehivavy hiara-hisotro aminy. Ary tena tsy ho amin'ny fahitalavitra intsony! Fa enga anie izy hihanoka hatrany ireo fahafinaretan'ny fifampikaontiana amin'ny fotoana tokony ho izy. Sady raha nijanona koa izy, ho fandanindaniam-poana anà lehilahy manintona ara-batana izany.